Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. अवैध रुपमा लाखौं रकम असुल्दै झापाका डिएसपी ओली – Emountain TV
झापा, १ साउन । सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल सुरक्षा वेस क्याम्प शनिश्चरे झापाका डिएसपी ओजेश ओलीले व्यापारीहरुसँग मासिक नजरना उठाउने गरेको रहस्य खुलेको छ । करिव तीन महिना अघिदेखि शनिश्चरे क्याम्पमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका ओलीले बिभिन्न व्यापारीहरुबाट मासिक रुपमा लाखौं रुपैँया अवैध रुपमा असुल्दै आएको तथ्य बाहिर आएको हो ।
देश तथा जनताको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीहरुबाट नै जनता लुटिएको खबर समय समय आउने गर्दछन् । यस्तै सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल सुरक्षा वेस क्याम्प शनिश्चरे झापाका डिएसपी ओजेश ओलीले व्यापरीहरुसंग पैसा उठाउने गरेको पाइएको छ । उनले करिव तीन महिनादेखि शनिश्चरे क्याम्पमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका हुन् । पूर्वी नाकाको भारतबाट नेपालतर्फ आयात गरी व्यापार गर्दै आएका व्यापारीहरुबाट अवैध रुपमा प्रति व्यापारी एक हजारदेखि ३२ हजारसम्म उठाउने गरेको व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
डिएसपी ओजेश ओलीले कपडा, किराना, हार्डवेयर, सुर्ती, काठ लगायतका व्यापारीहरुबाट मासिक रुपमा आफु मातहतका सिपाही खटाएर रकम असुल्दै आएको व्यापारीहरुको आरोप छ । मेचीनगर, दमक, उर्लाबारी क्षेत्रका व्यापारीहरुबाट सादा पोसाकमा खटाइएका राजबंशी थरका घमूवाले पैसा लाने गरेको स्वयम् व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
हरेक महिना बितेपछि यदी व्यापारीले पैसा दिन ढिलो गरे पुर्व पश्चिम राजमार्गको बिभिन्न क्षेत्रमा चेक पोईन्ट खडा गरी साथै चारआली जंगलमा छड्के रुपमा चेक गरी व्यापारीको सामान हडप्ने गरेको व्यापारीहरुको आरोप छ । झापा उर्लावारीकी एक महिला व्यापारीले केही दिन अघि डिएसपी आफैले फोन गरेर पैसा मागेपछि आफुले १० हजार घुमुवा राजबंशीको हातमा दिएको बताईन् ।
यस्तै अन्य पाँच हजारदेखि २० हजार साथै सामुहिक रुपमा रकम बुझाउने दर्जनाँै व्यापारीहरु रहेका छन् । उनीहरुले घुमुवा मार्फत डिएसपी ओलीलाई पैसा पठाउने गरेका छन् । यस बिषयमा सशस्त्र प्रहरी पुर्व क्षेत्रीय बल नम्बर १ बाहिनीका बाहिनी पति डिआईजी नगेन्द्र वहादुर थापासँग बझ्दा यस बिषयमा आफुले बुझ्ने बताउनु भयो ।
केही दिन अघि ओलीले बेस क्याम्प भित्रको काठ चिरान गरी आफ्नो निजी सामान बनाउने गरेको तथ्य समेत बाहिर आएको थियो । हरेक व्यापारीले पूर्वी नाकाबाट सामान भित्राउँदा ओलीलाई मासिक रकम बझाउनु पर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय शनिश्चरे बेस क्याम्पको नयाँ भवन बनाउने भन्दै ओलीले रकम माग्ने गरेको समेत स्रोत बताउँछ ।
डिएसपी ओलीको नेतृत्वको सेटिङमा नुनदेखि सबै सामान तस्करी भइरहँदा सम्बन्धी निकाय मौन छ । सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प नजिक शनिश्चेरमा रहेको छ । तर सम्पुर्ण व्यापारीसंग कनेक्सन हुने गरेको छ । प्रहरीलाई महिनावारीका हिसाबले रकम बुझाएर तस्करी गर्ने गरेको व्यापारीको भनाई छ । नत्र भने सामान बीचबाटै खोसिन्छ ।